विवाह गर्न के उपाय अपनाउनुपर्ला ? मेरो असाइलमको केसमा रोकावट आउँछ कि आउँदैन ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
म नेपालबाट विवाह गर्न के–१ भिसामा अमेरिका आएको थिएँ, तर कारणवश हाम्रो विवाह हुन सकेन र म स्टाटसविहीन भएँ । तत्काल नेपाल फर्केर जान सक्ने अवस्था नभएका कारणले यतै बस्न मैले असाइलमको निवेदन दिएको थिएँ । औंठाको छाप लगाउने र वर्क परमिट स्वीकृत हुने काम भएको छ ।
म नेपालबाट विवाह गर्न के–१ भिसामा अमेरिका आएको थिएँ, तर कारणवश हाम्रो विवाह हुन सकेन र म स्टाटसविहीन भएँ । तत्काल नेपाल फर्केर जान सक्ने अवस्था नभएका कारणले यतै बस्न मैले असाइलमको निवेदन दिएको थिएँ । औंठाको छाप लगाउने र वर्क परमिट स्वीकृत हुने काम भएको छ । अहिले फेरि हाम्रो कुरा मिलेर विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनाले अब विवाह गर्न के–कस्तो उपाय अपनाउनुपर्ला ? मेरो असाइलमको केसमा कुनै रोकावट आउँछ कि आउँदैन ? कृपया, उचित सल्लाहको आशा राखेको छु ।
– बी. थापा, अमेरिका
के–१ को फियान्सी भिसामा आउने विदेशी नागरिकहरुले उक्त के–१ को भिसा पेटिसन पेश गर्ने अमेरिकी नागरिकसँग अमेरिका प्रवेश गरेको मितिदेखि ९० दिनभित्रमा विवाह दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विवाह दर्ता गरेपछि फर्म आई–४८५ एप्लिकेसन युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ९० दिनभित्रमा विवाह नगरेको खण्डमा के–१ भिसा समाप्त हुनेछ र उक्त के–१ भिसामा अमेरिका आउने व्यक्ति अध्यागमनको कानूनअनुसार अमेरिका छाडी जानुपर्ने हुन्छ । यदि अमेरिका छाडी नगए डिपोर्टेसनको कारबाहीमा पनि पर्न सक्ने हुन्छ । यदि तपाईं के–१ भिसामा आएर ९० दिनभित्रमा विवाह नगरेको भए तपाईंलाई कानूनी अड्चन आउन सक्छ । तर, तपाईंको प्रश्नमा उल्लेख भएअनुसार असाइलम गरी फिङ्गर प्रिन्ट र वर्क परमिट पनि प्राप्त भएको अवस्थामा ९ महिनाभन्दा बढी समय व्यथित भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
९० दिनभन्दा पछि उक्त के–१ भिसाको निवेदन पेश गर्ने अमेरिकीसँग नै विवाह गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्नको हकमा कानूनी प्रावधान स्पष्ट नभएको भए तापनि ९० दिनपछि विवाह गरेको खण्डमा सो के–१ भिसामा आएको विदेशी नागरिकले आई–४८५ निवेदन पेश गरेमा एडजष्टमेन्ट गर्ने वा ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्न सक्ने छैन भनेर स्पष्टरुपमा कानूनले रोकावट गरेको देखिँदैन । त्यसैले तपाईंको असाइलमको निवेदन पेन्डिङ भए तापनि विवाह गरी त्यसैको आधारमा आई–४८५ एप्लिकेसन पेश गर्ने सुझाव छ । विवाहकै आधारमा ग्रीनकार्ड हुने भएको खण्डमा असाइलमको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको केस जटिल भएकाले अनुभवी कानून व्यवसायीको सहयोग लिन सुझाव छ ।